dhuuqmada naasaha iyo siilka tee.. - iftineducation.com
iftineducation.com – Dhuuqamada galmada ka hor oo xoojisa Awooda Raga iyo in ay biyaha Dib u dhacaan
Bulsha:- Dhunkashada ayaa ah mid caalamka oo dhami isku raacay in labada xiriir ka dhexeeyo isku tusaan jacaylka ka dhexeeya iyo xiisaha ay isu qabaan. Laakiin, waxa jirta in si sahlan loo iloowo habkan fudud ee keenaya raaxo iyo dareen aad u badan.
Dhunkashada ayaa noqon karta mid u furta lamaanaha is jecel raaxaysi dareen badan ama isku tusaan in ayna intaa wax kabadan dhexdooda ka dhacayn. Si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegtay khuburada galmada galmada.net, suleykha in ay muhiim tahay in aad loogu fiirsado dhunkashada.
Dhunkashada ayaa waxa ay tahay mid aan muujinayn oo kaliya in lamaane isqabaa ay ku midoobayaan ayagaa oo dibnaha isa saaraya, laakiin ay muujinayso in ay isleeyihiin oo ay xoojinayso dareenka jacayl ee ka dhexeeya, ayay tiri suleykha